Hal bil gudaheed, in ka badan 26 qof ayaa lagu dilay Gobalka Konso | Addis Maleda
መነሻ ገጽSoomaaliWararka AbolHal bil gudaheed, in ka badan 26 qof ayaa lagu dilay Gobalka...
Sarkaal ka tirsan maamulka deegaanka oo magaciisa ka gaabsaday ayaa sheegay in dad ka badan 26 qof ay dabley aan haybtooda la aqoonsan ku dileen muddo hal bil gudaheed ah gobalka Konso iyo deegaanada deriska la ah ee maamulka Koonfur Galbeed.
Gobolka Konso ee Konso ayaan joogsan weerarada ay kooxaha hubaysan ee aan haybtooda la garanayn ay ka fulinayaan xiliyada qaar Segen iyo deegaanada kale ee Konso ka tirsan tan iyo 7-dii April 2014.
Wargeyska addis maleda Subaxnimadii hore ee saaka ayaa waxay maqashay in dad ka badan 26 qof ay ku dhinteen weerarka, in ka badan 100 kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana dadka lagala baxay guryahooda.
Guryihii iyo hantidii ay lahaayeen beeralayda oo ku kala yaalay dagmooyinka iyo deegaanada kala duwan ayaa lagu gubayaa deegaanka Konso ee ka tirsan degmada Segen Zuria ee degmada Burji gaar ahaan degmada Ale, degmada Derashe,gobalka Amaro.
Sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in dad aad u fara badan oo ku dhaqan deegaanka Konso ay ka barakacayaan, kuwaasi oo ka barakacaya guryahooda si ay naftooda u badbaadiyaan.
Muddo todobaad ka badan ayaa laga joogaa markii uu hakad ku yimid gaadiidkii isaga kala gooshi jiray magaalada Carbisoch iyo degmooyinka kale ee ka tirsan degmada Segen Zuria, degmada Caleso ilaa deegaanka Konso, iyadoo bulshaduna ay u socon weyday inay u kala guurto.
Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee maamulka Koonfur Galbeed, Booliska Federaalka iyo kuwa difaaca ayaa lagu daadiyay deegaanada iyo degmooyinka kala duwan si ay u xasiliyaan amniga, hase ahaatee waxaa sii socday weerarada ka dhaca deegaanada aysan ciidamada amnigu ku lug laheyn. .
Dadka deegaanka ayaa soo sheegay in guud ahaan 17 qof oo aan waxba galabsan ay kooxda dableyda ah qafaasheen oo ay u kaxaysteen meel kale oo ay ka qabsadeen Segen Zoria Woreda Center, Addis Ababa, illaa iyo 18-kii Abriil, 2014.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in aysan jirin hay’ad dowladeed oo isku dayday in ay sii deyso raggan, sidoo kale booliiska federaalka iyo ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Segen ayaan isku dayin in ay sii daayaan raggan intii ay afduubka ku jireen, iyagoo sheegay in aan amar lagu bixin.
Sidoo kale waxa uu sheegay in Maamulka Koonfur Galbeed iyo Dowladda Federaalka aysan wax tallaabo ah ka qaadin kooxaha hubeysan ee ka howlgala deegaanadaasi.
Amare Aklilu oo ah madaxa kooxda xiriirka dadwaynaha ee xafiiska isgaadhsiinta dawlada ee degmada khaaska ah ee Amaro ayaa sheegay in weerarada joogtada ah ee ka dhacayay degmada khaaska ah iyo deegaanada dariska la ah tan iyo 17-kii April 2014 aysan joogsan ilaa ay ka codsato aroortii.
Todobaadki hore ayay ahayd markii maleeshiyaad ka soo jeeda degmada Galana ee galbeedka Guji ee ismaamulka Oromia ay gudaha u galeen deegaano kala duwan oo Amaro ah oo ay weerar ku qaadeen sida uu sheegay hogaamiyaha kooxdaasi.
Waxa uu intaasi ku daray in 10-May-2014-ka Deegaanka Tifate lagu dilay Labo Carruur ah,islamarkaana la dhacay in ka badan 40-Ari ah.
Hal qof oo ka soo jeeda deegaanka Derba May 2, 2014, iyo mid ka mid ah dhalinyarada Sharo Kebele May 7, 2014, waxaa dilay dabley hubaysan.
Agaasimaha Xafiiska Isgaadhsiinta Dawladda ee Degmada Gaarka ah ee Derashe
Ardayga Tesfaye ayaa isna dhankiisa sheegay in kasokow falalka amaandari ee ka socda degmada gaar ka ah ee Deerashe ay ciidamada gaarka ah ee gobolka, booliska federalka iyo kuwa difaacaba aysan joojin weerarada ay ka geysanayaan deegaanada kala duwan ee deegaanka.
Waxa uu sheegay in ilaa iyo hadda ay ka barakaceen dad ka badan 25,000 oo qof oo ku nool degmada, waxaana socda dadaallo lagu ogaanayo tirada dadka dhintay, kuwa fudud iyo kuwa dhaawacmay.
Dibaba oo ah madaxa waaxda isgaadhsiinta dawlada ee deegaanka Konso ayaa subaxnimadii dhawr jeer telefoon la soo xidhiidhay balse wax jawaab ah kamay helin. Geresu Kataale oo ah madaxa Xafiiska Nabada iyo Amniga ee Konso ayaa isna codsigaasi soo jeediyay, isaga oo aan ka jawaabin telefoonkiisa.
Previous articleIskaashatooyinka gobolka ayaa lagu wadaa inay bedelaan kuwa iibiya sibidhka
Next articleXidhiidhka Itoobiya iyo Ereteriya oo baarlamaanka su’aalo laga weydiiyey